Mogadishu Journal » Xildhibaannada baarlamaanka oo ansixiyay sharciga la dagaalanka Musuqmaasuqa
Xildhibaannada baarlamaanka oo ansixiyay sharciga la dagaalanka Musuqmaasuqa
Mjournal :-Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta meel mariyay Hindise sharciyeedka dhismaha Guddiga madax banaan ee la dagaalanka Musuq maasuqa, kaasoo horay u soo jeedisay Xukuumadda.
Dhismaha Guddigan ayaa gacan ka geysan doona la dagaalanka musuq maasuqa oo ah waxyaabaha ugu weyn ee ragaadiyay dowladda, isla markaana horay u jireen Kiisas musuq maasuq ay ku lug yeesheen Mas’uuliyiin, kuwaasoo aan maxkamad la soo taagin.
Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo diyaarisay Hindise sharciyeedka dhismaha Guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka Musuq maasuqa, iyadoo hadii la dhiso Guddiga uu ka mid noqonayo Guddiyada madaxa banaan.
Sharcigan oo muddo ay ka doodeen Xildhibaanada ayaa waxaa ugu dambeyn maanta loo qaaday cod, iyadoo ay ansixiyeen illaa 141 Mudane, iyadoo aanay jirin cid ka aamustay.
Dhinaca kale Xildhibaanada ayaa goor sii horeysay ansixiyay Miisaaniyadda Xukuumaddii Cumar C/rashiid ee sanadihii 2015/2016, waxaana ogolaatay 141 mudane, 12 xildhibaan ayaa diiday, halka 3 ka aamustay.
Soomaaliland oo baraha bulshada hawada laga saaray
Shabaab oo saddex ruux ku toogtay Shabeellaha Hoose by Ahmed Cali - Wed Dec 12th 6:28:00
Madaxda dalalka Ethiopia iyo Eritrea oo ku soo fool leh Muqdisho by Ahmed Cali - Tue Dec 11th 19:25:31
Madaxweyne Trump oo dhaqaalo u raadinaya dhismaha darbiga xuduuda by Ahmed Cali - Tue Dec 11th 15:45:30
Duqa Muqdisho oo Xarunta D/Hoose ku qaabilay Safiirka Cusub ee Turkiga by Ahmed Cali - Tue Dec 11th 12:45:17
Camey oo ka laabtay Dacwad uu kusoo oogay Gaas by Ahmed Cali - Tue Dec 11th 8:33:18